Samachar Batika || News from Nepal » महानायक राजेश हमालदेखि नव नायक अनमोल केसीसम्म कसकाे उमेर कति ? थाहा पाएपछी छक्क पर्नु हुने छ (भिडियो हेर्नुहोस्)
कलाकारहरु आफ्नो पारिवारिक सुख, दुःख बाँड्न तयार हुन्छन् तर उमेर ? सबैले लुकाउँछन् । आफ्नो करिअरमा असर पर्ने ड’रले पनि उमेरका विषयमा कमै कलाकारहरु मात्रै खुल्छन् । विशेषगरी चलनचल्तीमा रहेका अभिनेता/अभिनेत्रीहरु त यो विषयमा प्रवेश नै गर्न रुचाउँदैनन् ।भनिहाले पनि घटाएर बताउँछन् ।
पछिल्लो केहि समयदेखि भने हमाल पर्दामा देखिएका छैनन् । उनले ३ दशक नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बिताए । उनले बोलेका केहि डायलगहरु अझै पनि दर्शकहरुले भुलेका छैनन् । उनले पछिल्लो समय चलचित्र नखेले तापनि उनका फ्यान फलोअर्स भने घटेका छैनन् । अहिले पछिल्लो समय वि’वादमा आउने कलाकारहरुको जमात भने उ’ग्ररुपमा देख्न सकिन्छ । तर हमाल वि’वादमुक्त कलाकार हुन् ।
प्रकाशित मिति २२ असार २०७७, सोमबार १७:१८